Happy Color™ – Color by Number 2.5.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.5.3 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား ဘုတ္ Happy Color™ – Color by Number
Happy Color™ – Color by Number ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မင်္ဂလာအရောင်™ - အရေအတွက်အားဖြင့်အရောင် Google Play တွင်📖အရေအတွက်ကို & အရောင်စာအုပ်အားဖြင့်အရေအတွက်က 1 🔝paintဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ပွဲစဉ်3မထင်မှတ်နှင့်စကားလုံးဂိမ်း geeks အဘို့, လူကြီးများနှင့်လေးတွေများအတွက်စာအုပ် coloring ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ပဟေဠိဂိမ်းကစားသူကိုလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်လူများ, မင်္ဂလာအရောင်နဲ့မေတ္တာကိုလည်းများမှာ❤️
တိရိစ္ဆာန်များ🐼, ပန်း🌸, mandalas 😀, အားလပ်ရက်🎉နှင့်များစွာသောပိုပြီး: အခြေတည်အရောင်စာမျက်နှာများတွင်အကြီးအမျိုးမျိုးရှာဖွေပါ။
အရောင်အားလုံးရေးဆွဲနံပါတ်များအားဖြင့်မှတ်သားနေကြတယ်, ဒါကြောင့်လွယ်ကူသောဖူးပါ။ အရေအတွက်ကစာအုပ်အားဖြင့်သင့်အရောင်ကိုဖွင့်📕နှင့်❤ coloring ၏ရိုးရှင်းအပန်းဖြေနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပြန်လည်ရှာဖွေရန်အတွက်။ မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကို👨👩👧👦နှင့်အတူသင်အကြိုက်ဆုံးအရောင်စာမျက်နှာများတွင် Paint မျှဝေ, လူတိုင်းအတွက်သင့်ရဲ့စိတ်ကူးရေးဆွဲကြည့်ရအောင်🖼!
⚪ကိုသင်ပျင်း get ဘယ်တော့မှရှိထက်ပိုမို 2000 အခမဲ့ဓာတ်ပုံများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောင်စာအုပ်📖အတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်သင်တို့အဘို့အသစ်ကပုံရိပ်တွေကိုထည့်သွင်းထားပါသည်။
သငျသညျနံပါတျကိုနှစ်သက်အားဖြင့်စစ်မှန်တဲ့အရောင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်🔴ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကအသိုင်းအဝိုင်း📲 join ။ , ဆုကြေးငွေအရောင်စာမျက်နှာများတွင် Get ရယ်စရာ Quest များနှင့်ပြိုင်ပွဲအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနဲ့နံပါတ်အဆွေခင်ပွန်းသစ်ကိုဆေးသုတ်ကိုရှာဖွေ!
🔵လိုအပ်အရောင်နှင့်သင်ချင်တယ်နေရာတိုင်းမှာဓာတ်ပုံများကို recolor 🗺မရှိစက္ကူနှင့်ခဲတံ📝။
အရေအတွက်အားဖြင့်⚫ Paint နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာနှင့်အတွင်းပိုင်းငြိမ်းချမ်းရေး🏞ကိုရှာဖွေ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်တင်းမာမှုဖယ်ရှားပစ်ရ, သင့်အရောင်အတွေ့အကြုံကိုကြွယ်ဝစေ, အပန်းဖြေ။
ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်, ပိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောင်စာအုပ်ကျေးဇူးပြုပြီးစေသင့်ရဲ့ feedbacks ဝေမျှဖို့အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်: support@x-flow.app
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကအသိုင်းအဝိုင်း join နှင့်နေ့စဉ်ပိုပြီး pics ပျော်မွေ့: https://mobile.facebook.com/happycolorbynumber/
© 2019 Warner Bros. Entertainment က, Inc All Rights Reserved ။
Happy Color™ – Color by Number အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Happy Color™ – Color by Number အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Happy Color™ – Color by Number အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Happy Color™ – Color by Number အား အခ်က္ျပပါ
warpathproductionsapplications စတိုး714.13k
Happy Color™ – Color by Number ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Happy Color™ – Color by Number အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.5.3
ထုတ်လုပ်သူ Games For Rest
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.x-flow.app/privacy-policy.html
Release date: 2019-08-16 22:08:02
လက်မှတ် SHA1: 97:AD:83:6D:29:B9:E1:DD:BE:F6:DF:32:9B:DC:C1:71:BF:D5:CF:83
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Ihar Matushkin
အဖွဲ့အစည်း (O): Top Games For Rest
Happy Color™ – Color by Number APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ